Ebe Mekong onye mmekọ mmalite ọhụrụ nke Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Sustainability News » Ebe Mekong onye mmekọ mmalite ọhụrụ nke Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Sustainability News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ebe Mekong onye mmekọ mmalite ọhụrụ nke Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism.
Ebe Mekong ghọrọ onye ntinye aka dị mpako nke nkwupụta Glasgow na omume ihu igwe na njem nlegharị anya na COP26.
Nkwupụta Glasgow na omume ihu igwe na njem nlegharị anya na-achịkọta nyocha kachasị ọhụrụ na nka zuru ụwa ọnụ iji kwalite omume ihu igwe.
E meela mkpa maka usoro n'ụzọ zuru ụwa ọnụ maka omume ihu igwe na njem nlegharị anya, ọkachasị site na nyocha n'ime ikuku CO2 nke UNWTO/ITF mere wee wepụta ya na UNFCCC COP25 na Disemba 2019.
Karia mgbe ọ bụla, ụlọ ọrụ njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ nwere ohere pụrụ iche iji gosipụta ike mgbanwe ya site na mkpali na ịkwọ ụgbọ elu omume ihu igwe.
Dịka akụkụ nke mbọ ọ na-agba iji rụọ ọrụ onye ndu n'ime obodo njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ. Ebe Mekong ghọrọ onye nbinye aka na onye nrụpụta mmalite nke Nkwupụta Glasgow na Action na Tourism, nke ewepụtara na 4 Nọvemba 2021 n'oge Mgbakọ UN UN Climate Change (COP26).
Tọrọ ntọala na 2017, Destination Mekong (DM) bụ ọgbakọ njem nlegharị anya mpaghara raara nye ịkwado mpaghara Mekong, nke gụnyere Cambodia, PR China (ógbè Guangxi na Yunnan), Lao PDR, Myanmar, Thailand, na Viet Nam, dị ka ihe na-adigide na nsonye. njem nlegharị anya.
Nkwuwapụta Glasgow na omume ihu igwe na njem nlegharị anya na-ejikọ njem na njem nlegharị anya n'azụ usoro a na-ahụkarị maka omume ihu igwe, na-ejikọ ngalaba ahụ na nkwa zuru ụwa ọnụ yana na-akwado nkwado nkwado maka ọtụtụ ihe ịma aka na-eche azụmahịa na ebe aga n'ụwa niile.
Nkwuwapụta Glasgow na-akwado nkwalite ihu igwe na njem nlegharị anya site n'inweta nkwa iji belata ikuku na njem nlegharị anya opekata mpe 50% n'ime afọ iri na-abịanụ wee nweta Net Zero ozugbo enwere ike tupu 2050.
Dị ka ndị debanyere aha nke Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism, Destination Mekong agbaala mbọ ịkwado omume ya na ndụmọdụ sayensị kachasị ọhụrụ iji hụ na ụzọ ya na-aga n'ihu na ịrị elu nke na-erughị 1.5 Celsius C karịa ọkwa ụlọ ọrụ tupu afọ 2100. O kwenyekwara ịnapụta ma ọ bụ melite atụmatụ omume ihu igwe n'ime ọnwa 12, kwado mmemme na ụzọ ise nke nkwupụta (atụ, Decarbonize, Regenerate, Collaborate, Finance), na-akọ akụkọ ọha na eze kwa afọ, ma na-arụ ọrụ na mmụọ imekọ ihe ọnụ, na-ekerịta ezi omume na ngwọta, na-ekesa ozi.
"Karịa mgbe ọ bụla, ụlọ ọrụ njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ nwere ohere pụrụ iche iji gosipụta ike mgbanwe ya site na mkpali na ịkwọ ụgbọ elu omume ihu igwe. Ọ bụghị naanị ihe mberede kamakwa ihe gbasara ugwu mmadụ, "Catherine Germier-Hamel, CEO, Destination Mekong kwuru.
Nkwupụta Glasgow na omume ihu igwe na njem nlegharị anya na-achịkọta nyocha kachasị ọhụrụ na nka zuru ụwa ọnụ iji kwalite omume ihu igwe. A ga-akwado ya n'ime webụsaịtị otu Planet Sustainable Tourism Programme, nke omume akwadoro maka ndị na-eme njem nlegharị anya n'ofe ụwa ka ha tụlee dịka akụkụ nke atụmatụ mmemme ha, yana akụrụngwa ndị ọzọ. Dị ka nkwupụta ahụ na-ekwu: "Ntugharị ziri ezi na Net Zero tupu 2050 ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na mgbake njem nlegharị anya na-eme ka nnabata nke oriri na mmepụta ihe na-adịgide adịgide, ma na-akọwapụta ihe ịga nke ọma anyị n'ọdịnihu iji tụlee ọ bụghị nanị uru akụ na ụba kama ọ bụ ịmaliteghachi nke gburugburu ebe obibi, ụdị dịgasị iche iche. na obodo."
E mere ka ọ dị mkpa maka usoro n'ụzọ zuru ụwa ọnụ maka omume ihu igwe na njem nlegharị anya, nke kachasị site na nyocha nke CO2 ikuku nke UNWTO/ITF mere wee wepụta ya na UNFCCC COP25 na Disemba 2019. Nke a gosiri na e buru amụma amụma banyere ikuku ikuku sitere na njem. iji mụbaa site na 25% site na 2030 site na ọkwa 2016, megidere ọnọdụ ọchịchọ dị ugbu a.